IINKCUKACHA EZANDISIWEYO NGOKUSETYENZISWA KWEEKHOKI
Iwebhusayithi www.trainingcognitivo.it isebenzisa ikuki ukwenza iinkonzo zayo zibe lula kwaye zisebenze ngokufanelekileyo kumsebenzisi otyelela amaphepha esiza.
Iicookies yimigca emifutshane yokubhaliweyo enokuthi igcinwe kwikhompyuter okanye, ngokubanzi, kwisixhobo (ithebhulethi, i-smartphone, ...) yomsebenzisi xa isikhangeli sewebhu (umz. IChannel, iFirefox okanye iInternet Explorer) sibiza iwebhusayithi ethile . Kutyelelo ngalunye olulandelayo, ii-cookies zithunyelwa kwiwebhusayithi ezibazaleleyo (ii-cookies zokuqala) okanye kwenye indawo ebamkela (ii-cookies). Iicookies ziluncedo kuba zivumela iwebhusayithi ukuba ibone isixhobo soMsebenzisi. Zineenjongo ezahlukeneyo ezinje, umzekelo, ukuvumela ukuba uhambe phakathi kwamaphepha ngokufanelekileyo, ukhumbule iisayithi zakho ozithandayo kwaye, ngokubanzi, ukuphucula amava okukhangela. Bayanceda ekuqinisekiseni ukuba umxholo wentengiso oboniswe kwi-intanethi ujolise ngakumbi kumsebenzisi nakwimidla yakhe. Ngokusekwe kumsebenzi kunye nenjongo yokusetyenziswa, ii-cookies zingahlulwa ngokweekuki zobuchwephesha, iprofayile yeicookies, iikuki zangaphandle.
Ezi ziicookie ezibonisa indlela umsebenzisi ahamba ngayo kwisiza kwaye asetyenziselwa ukuthumela imiyalezo yentengiso ngokuhambelana nezinto ezikhethiweyo ezichazwe kwimeko yokujonga inethi.
NgokweMqinisekiso yaBucala, ngokulandela ubugcisa. 23 yoMmiselo woMthetho ka-196/2003, ukusetyenziswa kwezi kuki kufuna ulwazi olwaneleyo kunye nesicelo semvume kumsebenzisi.
Indawo isebenzisa iiKuki zobuGcisa ukuqinisekisa ukusebenza kwezinye iinxalenye zesiza, ukuqala ngokuhamba ngaphakathi kuyo.
IiKuki zomntu wesithathu zikwasetyenziselwa ukuvumela ukusetyenziswa kwemisebenzi yenethiwekhi yoluntu enje ngeGoogle +, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube.
Uphando; Google Adwords; Uhlalutyo lukaGoogle -Ukhuseleko lwedatha; Uhlalutyo lukaGoogle -Ukhuseleko kunye nemfihlo);
Ukuthintela ukusetyenziswa kwedatha yakho ngokuthi UGoogle Analytics cofa apha.
Khetha i-tab yangasese kwaye ucofe ku "cima imbali yakutshanje"
Kwiwindow ephumayo, khetha uluhlu lwexesha ofuna ukulicima kunye nohlobo lwezinto
Kwicandelo 'leekuki', cofa kwi £ Zonke iicookies kunye nedatha yesiza £ ukuvula iinkcukacha zefestile.
Ukucima i-cookie ethile, beka isikhombisi semouse kwisiza esivelise ikuki, emva koko ucofe u-X oboniswe kwikona yasekunene.
[ENG] -Usebenzisa njani iTachistoscope Web-App yasimahla!Senza isigaba